जब पूरा गर्न आमाबाबुले: कसरी चाँडै धेरै चाँडै मा एक सम्बन्ध
जब सम्बन्ध राम्रो रहेको छ, केही बिन्दु मा तपाईं निर्णय हुन सक्छ, परिचय गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य गर्न आफ्नो आमाबाबुले. तर कसरी चाँडै धेरै चाँडै लागि बैठक आमाबाबुले? हो त्यहाँ, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कुराहरू सुनिश्चित गर्न बैठक जान्छ? छन् कुराहरू आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य के गर्न सक्छन्? साँच्चै त्यहाँ छ, कुनै स्थिर जवाफ रूपमा गर्न छ जब आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य «पूरा आमाबाबुले». छन्, तथापि, विचार गर्न केही कुराहरू: ‘ परिचय कसैले तपाईं डेटिङ गर्न आफ्नो आमाबाबुले. आधिकारिक मा एक सम्बन्ध को व्यक्ति, त्यसपछि एक परिचय आमाबाबुले गर्न हुन सक्ने दुई तरिका: जब गर्नुपर्छ मेरो साथी भेट्न मेरो आमाबाबुले? यहाँ कसरी बताउन तिनीहरूले तयार छौं अन्य कारण तपाईं हुँदैन परिचय आफ्नो आकस्मिक डेटिङ मित्र हाम्रो परिवार छ किनभने यो पठाउँछ एक भ्रामक सन्देश व्यक्ति तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको छ । हो हामी वा छैन हामी आकस्मिक? यदि तपाईं चाहनुहुन्छ कुराहरू राख्न आकस्मिक त्यसपछि अभिभावकको भूमिका हो भन्दै विपरीत छ । र तपाईं प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अधिक गम्भीर, एक आमाबाबुको परिचय दिइरहेको छ, यो घोडा अगाडि गाडी छ । ‘ आफ्नो आकस्मिक डेटिङ साथी टाढा छ । दिन को सम्बन्ध बन्न समय एक सम्बन्ध । आफ्नो डेटिङ आशा पनि उच्च छ? छन् भने तपाईं मा एक सम्बन्ध, त्यसपछि निर्णय गर्दा परिचय गर्न आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य गर्न आफ्नो आमाबाबुले निर्भर दुवै मनसाय र गम्भीरता सम्बन्ध र आफ्नो आमाबाबुले. मेरो आमाबाबुले बरु गम्भीर छ । म भने ल्याउन कसैले घर पूरा गर्न तिनीहरूलाई तिनीहरूले ग्रहण हुनेछ, म छु बारे गम्भीर व्यक्ति छ । यो कुरा थाह पाएपछि, म मात्र परिचय कसैले गर्न मेरो आमाबाबुले भने सम्बन्ध थियो, धेरै गम्भीर छ । त्यसको विपरीत, म मा गरिएको छ संग सम्बन्ध मान्छे जसको आमाबाबुले एक धेरै अधिक आकस्मिक छ । म भेट आमाबाबुको जब सम्बन्ध थियो, अझै पनि एकदम नयाँ वा आकस्मिक तथापि निमन्त्रणा पूरा गर्न मेरो आमाबाबुले थियो विस्तारित छ । जब म यसो भनेर म मात्र परिचय प्रेमी गर्न मेरो आमाबाबुले जब सम्बन्ध धेरै गम्भीर छ, यो कहिलेकाहीं आहत व्यक्ति । हेर्न मौसम प्रकरण को मास्टर को कुनै पनि जब राहेल प्रश्न छ बैठक बारे आफ्नो भारतीय आमाबाबुले. कुनै, यो ठीक छ । यदि यो अजीब, ‘ केहि छैन भनेर तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ. तर यो सिर्फ मलाई जस्तै महसुस छौं लाज मलाई वा केहि. हेर, यो फरक छ, ठीक? तपाईं हुनुहुन्छ भने सेतो व्यक्ति र तपाईं डेटिङ गरिरहनुभएको कसैलाई, तपाईं बस कल आफ्नो आमाबाबु र तिनीहरूलाई बताउन, अरे, म छु डेटिङ यो व्यक्ति, र तिनीहरूले छौं जस्तै, ओह, ठूलो छ । मलाई आमन्त्रण भन्दा उहाँलाई र फिड, उहाँलाई जस्तै, चिकन र मो: मो.
‘ फिर्ता आउन र शेयर के तपाईं को लागि काम
नमस्ते लौरा, ‘ एक आकार फिट बस््छ सबै लागि जवाफ छ यो प्रश्न । म यो साँच्चै त धेरै कारक निर्भर. उदाहरणका लागि, तपाईं उच्च विद्यालय मा आवश्यकता पूरा गर्न आमाबाबुले सुपर प्रारम्भिक लागि अनुमति गर्न पनि मिति. त्यही जान्छ भने, तपाईं एक धेरै परम्परागत धार्मिक परिवार । एक वयस्क र एक किशोर म भन्न चाहन्छु महिना हुन सक्छ बरु लामो वा बरु छोटो मा निर्भर तपाईंको परिस्थिति छ । यो एक आकस्मिक किक-यो प्रेमी, वा एक गम्भीर प्रेमी? धेरै मानिसहरू लागि छ महिना आवश्यक समय को राशि थाहा छ भने, तपाईं जस्तै साँच्चै कसैले वा छैन । अक्सर पछि यो महिना मार्क म थाह एक प्रेमी थिएन एक राम्रो फिट पनि भने, त्यसपछि यो मलाई लिएर अर्को केही महिना कल गर्न भने, सबै बन्द छ । त्यसैगरी भने म थाह, उहाँले थियो एक राम्रो फिट महिना पछि त म सुरु गर्न संक्रमण मा एक अधिक गम्भीर मानसिकता भने म थिएन नै छ । सादर संग बैठक गर्न आफ्नो आमाबाबुले आफैलाई सोध्नुहोस् केही कुराहरू: तपाईं महसुस पूरा गर्न तयार भएको छ? यदि छैन भने किन छैन? यो छ किनभने यो सम्बन्ध छैन तयार छन् वा त्यहाँ केही कारक बनाउने तपाईं अनिच्छुक छन् कि स्वतन्त्र सम्बन्ध को? (आई ई भाषा बाधा, जातीय, राजनीतिक, मतभेद, आदि.) भने यो उत्तरार्द्ध त्यसपछि यी कुराहरू छलफल गर्न आफ्नो साथी संग बैठक अघि आमाबाबुले.
‘ जोगिन वा ढिलाइ
पनि सोध्न, आफ्नो प्रेमी भने अधिकांश आफ्नो ब्ययफ्रेंडस सामान्यतया. म हाल हेरिरहेका मौसम को मास्टर को कुनै पनि र थियो कसरी व्याख्या मा भारतीय परिवार ‘ परिचय सबैलाई तपाईं डेटिङ गर्दै आफ्नो आमाबाबुले तपाईंलाई रुचि के मा सेतो परिवार छ । एउटै निश्चित लागि जान्छ मुसलमान परिवार छ । ल्याउन कसैले घर धारणा छ कि हामी हुनुपर्छ विचार विवाह, यो हुनुपर्छ गम्भीर छ । तर धेरै परिवार त्यहाँ कुनै धारणा परे, «अरे आमाबाबु भेट्न मेरो प्रेमी». त्यसैले गेज प्रयास बैठक के आफ्नो आमाबाबुले मा मतलब, आफ्नो संसारको । शायद यो साँच्चै कुनै ठूलो सम्झौता छ, या शायद यो छ । त्यसै गरी यदि तपाईं तयार छैनन् गर्न छ उहाँलाई भेट्न आफ्नो आमाबाबुले धेरै पारदर्शी रूपमा गर्न किन छ. यो सजिलो अपमान गर्न कसैले वा गलत बुझयो हुन छैन भने तपाईं किन व्याख्या यो पनि चाँडै । म भेट मेरो पति आमाबाबुले साँच्चै लेट मा हाम्रो सम्बन्ध हो, तर त्यो किनभने तिनीहरू बस्थे साँच्चै टाढा र किनभने तिनीहरूलाई बैठक निहित विवाह नजिकै थियो. सीधा र शेयर अधिक विशेष को आफ्नो अवस्था त म दिन सक्छन् तपाईं अधिक विशिष्ट सल्लाह छ । शुभकामना र धन्यवाद लागि बाहिर व्यापक छ । आत्म प्रचार भ्रमित डेटिङ बाचेको व्यक्ति फर्केर पत्नी र आमा । म ब्लग बारेमा सबै टुट्छ मा, डेटिङ सल्लाह दिने (अन्य पक्ष देखि) मदत गर्न एकल पाउन स्वस्थ, खुसी, स्थायी सम्बन्ध छ ।
← अनलाइन वेब च्याट
उठयो महिला →